E-DRC: Isosha elisempumalanga livula umlilo futhi libulala izakhamizi okungenani eziyi-12 - izingcingo ze-teles
Abezokuphepha bafuna lo mlisa osedolobheni laseSange, eduze komngcele waseBurundi, kusho umbusi walesi sifundazwe.
Isosha empumalanga yeDemocratic Republic of the Congo lidubule labulala okungenani abantu abangu-12 kwalimala abanye abayisishiyagalolunye engozini yokudakwa, kusho iziphathimandla zesifunda.
Abezokuphepha bathungatha lo mlisa osedolobheni laseSange, amakhilomitha angama-24 ukusuka emngceleni waseBurundi, nalapho kwenzeke lesi sigameko, kusho umbusi wesifundazwe saseSouth Kivu uTheo Kasi ngoLwesihlanu isitatimende.
"Umuntu ophethe yilungu elidakiwe le-FARDC (amabutho ahlomile e-DR Congo) avulele ngenkani izakhamizi ezingama-20 ebezihamba ngendlela yakhe", kusho umshushisi e-Uvira.
UCaptain Dieudonné Kasereka, okhulumela amabutho e-Uvira, uthe lo msolwa obephethe izibhamu ubesemgijimeni futhi usahlomile.
"Ithimba lamasosha nethimba le-UN basesifundeni ukuzothulisa abantu, lokhu kukhombisa ukungahambisani nemikhosi," kusho yena.
Izakhamizi ezithukuthele zivimbe uMzila 5 onqamula kule ndawo, usebenzisa amagatsha namathayi avuthayo.
Inqwaba yezingane zibulewe ”esifundeni esinenkinga…
I-DRC ye-Fally ipupa iyinkimbinkimbi .. Boketshu motema esuki ..landa…
Inkulumo-ze kaKagame ithathe indawo yakhe yomlomo wakhe uJeune Afrique. Uhlobo ...
Baphinde badalula nezidumbu eziyi-12, ezazimboze imijondolo yomngcwabo, endaweni evame ukuba semgwaqweni evimba traffic, ofakazi abaningi batshela abezindaba ze-AFP.
UNdaburwa Rukalisa, umholi wendawo kwaSange, uthe leli sosha beliyilungu le-Battery yase-F122DC yasendaweni engu-XNUMX futhi "ibidakiwe" ngaleso sikhathi.
Abantu abayisishiyagalolunye bangeniswe esibhedlela "besesimweni esibucayi", engeza.
Isibalo sesikhashana sokushona kwabangu-12 siqinisekiswe ngofakazi, kanti owezomthetho uthe intombazane eneminyaka emibili ubudala ibiphakathi kwalabo abashona kule rampage.
UMongameli Félix Tshisekedi ukubize lokhu kuhlasela ubugebengu obukhulu futhi wadlulisa amazwi enduduzo emindenini yezisulu.
Umkhosi omkhulu waseDRC ubonakala kabanzi njengabantu abangaqeqeshiwe futhi abangasebenzi kahle, kanti abasebenzi bawo bavame ukusolwa ngokwenza amacala abenze izakhamuzi.
Ojenene abadala babhekene nemijondolo yaseMelika neyaseYurophu ngezinsolo zokuhlukumeza, futhi basolwa yiNhlangano Yezizwe ngokunikeza abavukeli kanye neqembu lezigebengu izikhali.
umthombo: https: //www.aljazeera.com/news/2020/07/soldier-eastern-drc-shoots-kills-12-civilians-200731153626890.html